आँफूभित्र के- कस्तो प्रतिभा छ भन्ने हेक्का हुँदैन । – Durbin Nepal News
आँफूभित्र के- कस्तो प्रतिभा छ भन्ने हेक्का हुँदैन ।
प्रा.डा. दुर्गा दाहाल	२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:५३
-कमलाको अर्थ “ उत्तम स्त्री “ पनि हुन्छ । उहाँमा कतिको उत्तमता छ, अहिलेलाई मेरो खोजीनितीको विषय भएन । समाज र समुदायमा उहाँले गरेको गुण-दोषको आधारमा भोली उहाँको अनुगमन र मूल्याँकन हुनेनै छ ।
प्रतिभा सबैमा हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिमा प्रतिभाहरू सुप्त, लुप्त र जाग्रत अवस्थामा हुन्छन । प्रतिभावान व्यक्तिलाई पनि धेरै अवधिभर आँफूभित्र के- कस्तो प्रतिभा छ/ छन भन्ने कुराको हेक्का हुँदैन । माता- पिता, गुरू, सन्त अथवा कसैले ऊ भित्र त्यो प्रतिभा लुकेको छ भनेर त्यसलाई प्रस्फुटित हुने मौका र मंच प्रदान गरि दिनु पर्छ । मलाई “ तारे ज़मीन पर “ नामक हिन्दी चलचित्र र “ The Secret “ भन्ने American मूवीको स्मरण हुन्छ जब बाल-बालिकाको प्रतिभा विकासको कुरा आऊँछ ।
बाल- बालिकामा भएका अन्तर्निहित प्रतिभाहरूको प्रष्फुटन गराउने हेतुले अहिले आएर डायस्पोरामा भएका विभिन्न संघ- संस्थाहरूले विभिन्न समयमा अनुकरणीय, उदाहरणीय र स्वागतयोग्य कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन ।
यसै क्रममा New York स्थित N & J entertainment नामक सृजनशील संस्थाले दोश्रो पटक बाल- बालिका हरूको प्रतिभा मंचस्थ गर्न गईरहेको विषय प्रति मेरो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ ।
कार्यक्रम यही जुन महिनाको २९ तारीखका दिन New York शहरमा सुसम्पन्न हुन गई रहेको सूचना प्राप्त भएको छ ।
सबै -सबैलाई ( विशेष गरि New York निवासी साथी- भाई, बन्धु- बान्धव र इष्टमित्र हरूलाई) सादर अनुरोध गर्दछु । विशेष जानकारीका लागि यसैमा संलग्न लिंकलाई पछ्याउनु होला ।
संस्थाकी अध्यक्ष साहित्यकार बैनी कमला कबिनलाई हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना र अग्रीम बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको उच्च सफलताको कामना गर्दछु । जय होस !
२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:५३ मा प्रकाशित
’कठै’ महिला अधिकारवादीहरु
महरालाई गल्ति स्वीकार्न र प्रायश्चित्त गर्न डा. बाबुराम भट्टराईको सुझाव
लाचार आईजीपी, बदनाम नेपाल प्रहरी